Friday, March 25, 2011 11:17 AM earthquake photo, သတင်း | Posted by Unknown
Posted by Aung Kyaw Min on Friday, March 25, 2011 Labels:
မနေ့ညက လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျှင်သည် တာချီလိတ်မြို့နှင့် မိုင် ၂၀ ခန့်ဝေးကွာသည့် တာလေမြို့နယ်တွင် ငလျှင်ဒဏ်အဆိုးဆုံး ခံခဲ့ရသည် လူအသေပျောက်ကို အတိအကျသိရသေးပါ. ရာကျော်နိုင်သည့်ဟု ခန့်မှန်းနေကြသည်. တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်တွင် လှုပ်ရုံသာလှုပ်ခဲ့ပြီး အပျက်အစီး မများခဲ့ပါ.
Thursday, March 24, 2011 8:59 PM Egypt by Garmani | Posted by Unknown
Egypt by Garmani
7:16 AM U Tun Lwin | Posted by Unknown
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင် (ဓာတ်ပုံ - Myanmar Climate Chang Watch)
ဧရာဝတီ Thursday, 24 March 2011 15:17 အင်တာဗျူး
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမှုနှင့်အတူ မြန်မာ့ရာသီ ဥတုသည်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းများအတွင်း ဖောက်ပြန်မှုများစွာ ရှိလာသည်။ ရာသီဥတုများ ဖောက်ပြန်လာမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များကို အချိန်မီလျင်မြန်စွာ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းပေးနိုင်ရေးအတွက် မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ယခင်ကထက် ပိုမို အခရာ ကျလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ (မိုး/ ဇလ) ဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် မင်းနိုင်သူက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ဒေါက်တာထွန်းလွင်သည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မိုးလေ၀သဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၀န်ထမ်းဘ၀တွင် အစိုးရ ပညာတော်သင်ဆုဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (မိုးလေ၀သ) ကို ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အကြံပေးအရာရှိ) ရာထူးမှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ AIT တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော RIMES (Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System) ၏ နည်းပညာအကြံပေး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Consultant အဖြစ် MRCS, CARE Myanmar, Action Aid Myanmar, Eco Dev, NAG တို့တွင်လည်းကောင်း၊ Resource Person အဖြစ် ICHARM (Japan), EGRESS, World Vision Myanmar, Global Green အပါအ၀င် တခြားသော NGOs၊ INGOs များတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်မှု လျော့ပါးရေး လုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလမှစတင်ကာ Myanmar Climate Change Watch အမည်ရှိ ကိုယ်ပိုင် ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို လွှင့်တင်၍ မိုးလေ၀သနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများကို ရေးသားလျက်ရှိသည်။
မေး ။ ။ ၀န်ထမ်းဘ၀တုန်းက မိုး/ဇလ သတင်းတွေ တင်ပြရတာနဲ့ အခု ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုက်မှာ ရေးသားတင်ပြရတာ ဘယ်လို ကွာခြားသွားတယ်လို့ ခံစားရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အများကြီးကွာသွားတာပေါ့ဗျာ။ အရင်က ၀န်ထမ်းဆိုတော့ ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာရတာပေါ့။ ကိုယ့်အထက်မှာ ရှိတာပေါ့။ ကိုယ့်အထက်ကလူရဲ့ ခွင့်ပြုမှုတို့၊ အတည်ပြုမှုတို့ လိုတာပေါ့။ ဒါတွေကို အလုပ်သဘောအရ မလုပ်မနေ လုပ်ရတာပေါ့။ အခုကျတော့ တယောက်တည်း လုပ်လို့ရပြီး အပေါ်မှာလည်း တင်ပြစရာမရှိတော့ လွတ်လပ် သွားတာပေါ့။ အဓိက ကွာခြားတာကတော့ လွတ်လပ်မှုပါပဲ။
မေး ။ ။ အငြိမ်းစားဘ၀မှာ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက်တွေ ဆက်ထုတ်ပေးနေနိုင်အောင် ဘယ်လို အကိုးအကားတွေ၊ ကိရိယာတွေကို ကိုင်တွယ် သုံးစွဲနေပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဓိကကတော့ ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံရယ်၊ မိုးလေ၀သနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာတွေ ရရှိအောင် သင်ပေးလိုက်တဲ့ ဖလော်ရီဒါ တက္ကသိုလ်က ဆရာတွေရဲ့ သင်ကြားမှုတွေရယ်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနေရတာပါပဲ။ အခု ကျနော် လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ခန့်မှန်းချက်တွေအတွက် သုံးနေရတဲ့ ကိရိယာကတော့ အင်တာနက်ပါပဲဗျ။ အင်တာနက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်း အရင်းအမြစ်တွေ (source of information) ကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော် တတ်ကျွမ်းထားတဲ့ ပညာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းရတာပေါ့။
မေး ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဆရာ ရေးထားတဲ့ မိုးလေ၀သဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးထဲမှာ မိုးတိမ်တောင်၊ လေဆင်နှာမောင်းနဲ့ စိုက်ဆင်း လေပြင်းဖြစ်စဉ်တွေကို ကမ္ဘာမှာ လက်ရှိတိုင်းတာ နေသလို စကေးအသေးစိတ် တိုင်းတာနိုင်ဖို့အတွက် ရေဒါ တိုင်းတာချက်တွေ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါတွေကို မြန်မာပြည်မှာ တပ်ဆင်နိုင်ဖို့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းက ကြိုးပမ်းနေခဲ့တာ အခုထိပဲလို့ ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြောင့် အခုထိ အသုံးမပြုနိုင်သေးတာလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ အဓိကကတော့ နှစ်ပိုင်းပေါ့။ တပိုင်းကတော့ အထောက်အကူပြု ကိရိယာ အားနည်းတဲ့အပိုင်းပေါ့။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့။ လူတွေက လေဆင်နှာမောင်း ခန့်မှန်းလို့ရလား၊ မိုးတိမ်တောင်ကို မပြောနိုင်ဘူးလားဆိုပြီး မေးလာရင် နည်းပညာပိုင်း အရတော့ ပညာရှင်တွေက ပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အချိန်လောက်မှာ အင်အား ဘယ်လောက်နဲ့ ၀င်လာနိုင်တယ် ဆိုတာကို အနီးစပ်ဆုံး ပြောဖို့အတွက် အထောက်အကူပြု ကိရိယာတွေ လိုတယ်ပေါ့။
အထောက်အကူပြု ကိရိယာဆိုတာလည်း ထူးထူးထွေထွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုးလေ၀သဆိုင်ရာ ရေဒါ လိုတာပါပဲ။ ရေဒါကလည်း အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ ရေဒါရဲ့ တိုင်းထွာနိုင်စွမ်းအပေါ် မူတည်ပြီး သူတိုင်းထွာနိုင်တဲ့ အ၀န်းအ၀ိုင်း အတွင်းမှာတော့ အပ်ကျတာကအစ မြင်နိုင်တာပေါ့။ အခုအချိန်အထိတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရေဒါကောင်း တခုမှကိုမရှိဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ ကျောက်ဖြူမှာ မုန်တိုင်းကြည့် ရေဒါ တခုရှိပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်က ထုတ်တဲ့ ရေဒါပါ။ တပ်ဆင်တာကတော့ ၁၉၇၆ ခုနှစ် လောက်မှာလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မိုး/ဇလ က လူတွေလည်း ရိုရိုသေသေ သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာလကြာလာတော့ ပျက်စီး ယိုယွင်းလာတဲ့အတွက် အပိုပစ္စည်းထည့်ဖို့ လိုလာလို့ လိုက်ရှာတော့ မရတော့ဘူးဗျ။ မိုဒယ်လ်က အောက်နေပြီကိုး။ ဆိုတော့ ဒီရေဒါကြီးကို ဒီအတိုင်း ထားလိုက်ရတာပေါ့။ အဲဒီကတည်းက ကျနော်တို့လည်း ရေဒါသစ်ပြန်ရရေး ကြိုးစားကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရရာ ရကြောင်းကလည်း အကူအညီတောင်းတဲ့ အစီစဉ်နဲ့ပဲ တောင်းကြရတာပေါ့။ ကမ္ဘာ့ မိုးလေ၀သအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ စေတနာအလျောက် ထောက်ပံ့တဲ့အစီစဉ်က တောင်းတဲ့အခါကျတော့ မရခဲ့ဘူးဗျာ။ ပြောရရင် ကျနော်တို့ အလှူရှင် ရှာလို့ မရဘူးပေါ့။ မရတော့လည်း ရေဒါ မတပ်နိုင်ဘူးပေါ့။ လိုရင်းကတော့ ဒါပါပဲဗျ။
မေး ။ ။ ရေဒါတွေ တပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကုန်ကျနိုင်ပါသလဲ။ ဘာကြောင့် အစိုးရက မတပ်နိုင်သေးတာလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရေဒါကတော့ အမျိုးအစား မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမှာ ရေဒါပြန်တပ်မယ်၊ အဆောက်အအုံနဲ့ ၀န်ထမ်း အိမ်ရာတွေလည်း ပါမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တွက်ထားတာ ဒေါ်လာ ၇ သန်းလောက် ကုန်ကျပါမယ်။ အလုပ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ လေး၊ ငါးသောင်းနဲ့လည်း တပ်လို့ရပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် မတပ်သေးတာလဲ ဆိုတာတော့ ကျနော် ဖြေရမယ့် မေးခွန်းမဟုတ်လို့ မဖြေတတ်ပါဘူး။
မေး ။ ။ ပြည်တွင်းမှာ အင်တာနက် မြန်နှုန်းက တခါတရံမှာ အလွန်အမင်းကို ကျဆင်းသွားတတ်တယ်လို့ သုံးစွဲသူတွေက ပြောကြပါတယ်။ ဆရာလည်း အင်တာနက်အသုံးပြုပြီး မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းမှုတွေကို ၀က်ဘ်ဆိုက် တင်နေရတာဆိုတော့ အခက်အခဲ မကြုံရဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ ဒီလိုကတော့ ကြုံရပါတယ်။ ကောင်းလိုက်၊ မကောင်းလိုက်ပေါ့ဗျ။ နည်းနည်း ညံ့သွားတဲ့ အခါတွေမှာ အခက်အခဲ တွေ့တာပေါ့။ ဒီမှာသုံးလို့ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်က လူသုံးနည်းတဲ့ အချိန်တွေပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်ကောင်းကောင်း သုံးချင်ရင် ည ၁ နာရီကျော်မှ သုံးရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိုးလင်းတဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ လုံးဝ သုံးမရတော့ဘူး ဆိုရင်လည်း မြန်နှုန်းမြင့်ရတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ သွားသုံးရတာတွေ ရှိတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် ရတဲ့ စင်တာတွေကို သွားသုံး ရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို mobile user လုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မိုး/ဇလ သတင်းတွေကို အချိန်မီ ထုတ်ပေးနိုင်အောင်တော့ ကျနော်လည်း ကြိုးစားပါတယ်။ လုံးဝ မရတော့ဘူး ဆိုရင်တော့လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။
မေး ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတု ဖြစ်စဉ်တွေက အခုနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖောက်ပြန်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရာသီဥတု ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့ ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်မြင် မိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အဲဒါကတော့ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုကိုက ဖောက်ပြန်လာတာကိုး။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်လျော့ရမယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ အများဆုံး တတ်နိုင်တာကတော့ သစ်ပင်ပြန်စိုက်တဲ့ အလုပ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီအလုပ်ကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်နေကြရမှာပါပဲ။ ကမ္ဘာမှာတော့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာထားတာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်ရပ်ဝန်း (sector) က ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် အဓိက အကျိုးသက်ရောက် စေသလဲ ဆိုတာပါ။ ဥပမာ စိုက်ပျိုးရေးလား၊ စက်မှုလုပ်ငန်းလား၊ သစ်တောပြုန်းတီးတာလား၊ လူဦးရေတိုးမှုကြောင့်လား စတဲ့ ရပ်ဝန်းတွေအပေါ် မူတည် တွက်ချက်ထားတာ ရှိပါတယ်။
ကဏ္ဍအသီးသီးကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို လေ့လာတဲ့အခါ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်ကတော့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအတွက် အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ ဂျီဒီပီ လို့ ထွက်လာပါတယ်။ ဂျီဒီပီ ဆိုတာတော့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေး ညွှန်းကိန်းတခုပါပဲ။ ဒီအပေါ် မူတည်ပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်တယ်လို့ နောက်ဆုံး လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မေး ။ ။ တချိန်တုန်းက ပင်လယ် မှောင်ခိုလှေတွေဟာ မိုး/ဇလ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ပင်လယ်မှာ မုန်တိုင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထုတ်ခိုင်းတယ်၊ အဲဒီသတင်းပေါ်ထွက်လာလို့ အစိုးရ ကင်းလှည့်ရေယာဉ်တွေ ကမ်းကပ် ရပ်နားထားချိန်မှာ မှောင်ခိုလှေတွေ ထွက်လေ့ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာများ ပြောပြနိုင်ပါမလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျနော့်ဘက်ကတော့ လုံးဝ ငြင်းဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ မိုး/ဇလ ဌာနအနေနဲ့ အဲဒီလိုလုပ်လို့ လုံးဝကို မရနိုင်ပါဘူး။ မိုး/ဇလ ဌာနရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို မသိတဲ့သူတွေ ရမ်းသမ်းပြောတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိုးလေ၀သ ခန့်မှန်းချက် သတင်းတွေကို အရင်ကတော့ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်က ထုတ်တာပါ။ အခုတော့ နေပြည်တော်ပေါ့နော်။ မိုးလေ၀သ သတင်းတွေကို တဦးတယောက်က ထုတ်လို့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ထုတ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဆရာ ဘယ်လိုများ ခံစားရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ နာဂစ်ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်တွေးလိုက်ရင်တော့ မချင့်မရဲတော့ ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ မချင့်မရဲဖြစ်တယ်ဆိုတာက နာဂစ်က ဒီနေရာမှာ ဒီလို ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျနော် ၅ ရက်လောက် ကြိုသိနေတာပဲလေ။ ဒါပေမယ့်လို့ ကျနော်တို့အားလုံးက အတွေ့အကြုံ မရှိကြတာရယ်၊ ဒီအပေါ်မှာ သိပ်ပြီးတော့ အရေးတယူ မရှိတာရယ်၊ အထင်သေးတာလည်း ပါတယ်ပေါ့လေ။ ဒီလိုကြီး အထိတော့ မဖြစ်လောက်ဘူးဆိုပြီး ထင်ခဲ့ကြတာလည်း ပါတယ်ပေါ့လေ။ အားလုံးပါပဲ။ ဘယ်သူကြောင့်ရယ်လို့ အပြစ်မပြောပါဘူး။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆိုတော့ ပေးဆပ်မှုက ကြီးတာပေါ့။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ပထမဆုံးအကြိမ်တော့ ဒီလို ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော့် ခေါင်းထဲမှာ ရှိနေတာက နောက်တကြိမ် ထပ်မဖြစ်ဖို့ပါပဲဗျာ။ နောက်တကြိမ် မဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ကျနော်တို့ ဖြည့်ဆည်းသင့်တာ ဖြည့်ဆည်းရမယ်။ ပြုပြင်သင့်တာ ပြုပြင်ရမယ်။ ပိုကောင်းအောင် လုပ်သင့်တာ လုပ်ရမယ်။ နာဂစ်က ပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာပြီး အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ။
7:08 AM | Posted by Unknown
ကော့သောင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသည့် ရေလုပ်သား ဒုက္ခသည်များကို ယမန်နေ့က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - http://burmese.nldburma.org)
လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဖောင်များ၊ စက်လှေများ ပျက်ပြီး ပင်လယ်ထဲတွင် မျောပါနေသည့် ရေလုပ်သား ၇၀၀၀ ကျော် ရှိနေသော်လည်း ယမန်နေ့ကအထိ ကယ်ဆယ်ရရှိသူပေါင်းမှာ ၃၇၀၀ ခန့်သာ ရှိသေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်နှင့် နီးစပ်သူ တဦးထံမှ သိရသည်။
မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင် တပ်မတော် (ရေ) စစ်ရေယာဉ်များ၊ ပင်လယ်တွင်း ငါးဖမ်းရေယာဉ်များနှင့် ဒေသခံ ငါးဖမ်းစက်လှေများက ရေလုပ်သား ၃၃၇၄ ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်း ရေလုပ်သားများအနက် ၃၁၅၂ ဦးကို သက်ဆိုင်ရာ နေရပ်များသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်ရှိနေသော ရေလုပ်သား ၂၂၂ ဦးကိုမူ တာဝန်ရှိသူများက လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ၊ အ၀တ်အထည်များ၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများဖြင့် ထောက်ပံ့ ကူညီစောင့်ရှောက် ပေးထားကြောင်း ရေးသားထားသည်။
“အခုလောလောဆယ် စာရင်းသိရတဲ့ စက်လှေ၊ ငါးဖမ်းလှေမှာ ပါသွားတဲ့လူစာရင်းအရ ၇၀၀၀ ကျော်ဆိုပေမယ့် ကမ်းနားမှာ နေတဲ့ လူတွေက လူစာရင်းမရှိဘူး။ ကောက်လို့လည်း မရနိုင်သေးဘူး။ ဒါတွေ တိတိကျကျ ထပ်သိရရင် လူစာရင်း ပိုများ လာနိုင်တယ်” ဟု ဗိုလ်တထောင် သံလျှက်စွန်း ရေတပ်စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းနှင့် ရေနံရှာဖွေ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိုး တူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် Total E & P Myanmar ကုမ္ပဏီကလည်း ရေလုပ်သားများကို ကူညီရှာဖွေပေးခဲ့ပြီး ရေလုပ်သားများ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဆေးဝါး၊ အ၀တ်အထည်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ရေလုပ် သားတဦးလျှင် ကျပ် ၂ သောင်းစီကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့၍ ၎င်းတို့ပိုင် ရေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ် အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
1:03 AM Thakhin Kodaw Hmaing by Pho Than Chaung | Posted by Unknown
1:00 AM Miss Tourism Myanmar - 2011 | Posted by Unknown
Wednesday, March 23, 2011 9:47 PM Lay Phyu | Posted by Unknown
မဏ္ဍာပ် မထိုးရ၊ လူ မစုရ၊ စားမြိန်ထုတ် မထည့်လိုက်ရ၊ ရေအိုး မခွဲလိုက်ရ မနက်စောစောချတဲ့ အသုဘ
Monday, March 21, 2011 8:51 AM Ko Phone Maw | Posted by Unknown
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ မတ်လ အရေးအခင်းတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သော ကိုဖုန်းမော်၊ ပဉ္စမနှစ် (ဓာတု) ၏ အမကြီး မမာမာဝင်း၊ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသော ကိုခင်မောင်ထွန်း (B.Sc. Hist) ၊ မဝင်းဝင်းမြင့် (B.Sc. Phy)၊ ကိုမင်းထွဋ် III Yr Zoo တို့နှင့် စက်မှုအားမာန် စာစောင်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ကျန်ရစ်သူများ၏ ခံစားချက်များအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ကိုဖုန်းမော် ကွယ်လွန်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးသည်ကို ၁၃.၃.၈၈ က ချက်ချင်း မသိရကြောင်း၊ ၁၄.၃.၈၈ ရက် နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ဈေးထဲမှ ရေဒီယိုက တဆင့်ကြားရကြောင်း၊ ကိုဖုန်းမော်၏ ညီမငယ် မနီနီအောင်ကလည်း ၎င်း ကျောင်းတက်နေသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လှိုင်နယ်မြေမှ သိလာရကြောင်း အမလတ် (မမာမာအိ) က ဈေးမှကြားကြားချင်း ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဋ္ဌာနသို့လိုက်၍ စုံစမ်း၍ရာ ဆရာဝန်ကြီးများက ချွန်ထက်သော စူးနှင့်ထိုးမိ၍ သေဆုံးကြောင်း ပြောသည်။ အမလတ်က ဘယ်အချိန်လောက်က ဆုံးသလဲဟုမေးရာ ကျောင်း၌ပင် သေဆုံးခဲ့ဟန်တူကြောင်း ဖြေသည်။ ကျောင်းမှာ တခါတည်း သေရလောက်အောင် ထိုးတဲ့စူးက ဘယ်လိုစူးလဲ ဟုမေးသောအခါမှ သေနတ်ဒဏ်ရာလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့နောက် အမလတ်ကို မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး (၄၇ လမ်း ) သို့ ခေါ်ယူ၍ ကိုဖုန်းမော် အကြောင်းကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးမေးမြန်းကြောင်း ပြောပါသည်။
အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ အရပ်က အိမ်တွင် မဏ္ဍာပ် ထိုးပေးထားကြကြောင်း သို့သော် ရပ်ကွက်ကောင်စီက ခေါ်တွေ့ပြီး မဏ္ဍာပ်ကို ဖျက်ခိုင်းကြောင်း၊ လူ မစုရ၊ အသုဘအိမ်နှင့်တူအောင် မနေရဟု ပြောကြောင်း၊ ထိုနေ့မှစ၍ ၃ ရက်တိတ် ရပ်ကွက်ကို မီးဖျက်ထားကြောင်း ပြောပါသည်။
အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှလူများကိုလည်း ထောက်လှမ်းရေးက ကိုဖုန်းမော်နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းသောအခါ “လူအေးလေးပါ” ဖြေသူများကို “ဒါလောက် ဆိုးသွမ်းနေတဲ့ လူငယ်တဦးကို ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်နဲ့ လူကောင်းလို့ ပြောကြတာလဲ” ဟု ဟောက်ကြောင်း အမကြီးက ပြောပြပါသည်။
သတင်းစာတွင်လည်း နာရေးကြော်ငြာထည့်ခွင့်မရခဲ့ကြောင်း ထောက်လှမ်းရေးများ ခြေချင်းလိမ်နေကြကြောင်း၊ လမ်းနှင့် အိမ်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်ကာ ဓာတ်ပုံရိုက်နေခဲ့ကြောင်း ဆက် ပြောသွားပါသည်။ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများက ကိုဖုန်းမော် သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် ကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လာပြောပါသည်။
ဆက်လက်၍ မမာမာဝင်းက “၉ နာရီလောက်မှာ လမ်းထဲက လူတွေက လမ်းထိပ်အဝင်အထွက် လူများကို ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြောင်းကို လာပြောတယ် ..။ အမတို့ အနေနဲ့ အာဏာနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို အလွန်ရွံ့မုန်းတယ်” .. ဟု ပြောပါသည်။
သတင်းစာတွင် နာရေးကြော်ငြာ ထည့်ခွင့်မရ၍ ကိုဖုန်းမော် ကွယ်လွန်ကြောင်းကို ညီမငယ် ဖြစ်သူက သင်ပုန်းတခုတွင်ရေးပြီး အိမ်ရှေ့တွင် ထောင်ထားခဲ့ကြောင်း၊ ရပ်ကွက်ကောင်စီက ဖျက်ခိုင်းသောအခါ နာရေးကြော်ငြာ မထည့်ရမချင်း ဖျက်မပေးနိုင်ကြောင်း ပြောမှသာ သတင်းစာ ထည့်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးမည်ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်ပေးကြောင်း သိရသည်။
မြို့နယ်ရုံးမှ အတွင်းရေးမှူးက ဖုန်းမော် သင်္ဂြိုဟ်ရန်ကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာက သင်္ဂြိုဟ်ပေးရမည်လား မိသားစုက သင်္ဂြိုဟ်မလားဟု မေးရာ “အမတို့ မိသားစုက ကျောင်းသား အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သင်္ဂြိုဟ်ချင်တယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်” ဟု ပြောပြပါသည်။
“နေ့လည် ၁၁ နာရီမှာ အလောင်းကို ကြည့်ခွင့်ပေးမည်ဆိုပြီး ၄၇ လမ်း ရုံးကို ခေါ်သွားကြောင်း၊ အလောင်းကို ၁၇ ရက်နေ့ ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက်တော့လည်း မရပါဘူး၊ အမတို့က ဈေးသည်ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဈေးသည်တောင်မှ ကတိတည်သေးတာ၊ အစိုးရဆိုရင် ဈေးသည်ထက် ကတိတည်မယ် ထင်ထားတာ၊ အစိုးရဟာ ဈေးသည်လောက်တောင် ကတိမတည်ဘူး၊ ကုန်သည်ထက် ဖျင်းတယ်” ဟု မမာမာဝင်းက သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ရိုးသားစွာ ပြောပါသည်။
၄၇ လမ်းရုံးတွင် တော်တော်ကြာ စောင့်နေပြီးမှ ဆေးရုံကြီးကို ခေါ်သွားကြောင်း အရေးပေါ်ဋ္ဌာနတွင် မိနစ် ၃၀ လောက်စောင့်ရပြီးမှ အလောင်းကို အမလတ် တယောက်သာ ကြည့်ခွင့်ရကြောင်း၊ အလောင်းမှာ ဂျပန်ဆေးရုံတွင် ထားဟန်တူကြောင်း၊ အရေးပေါ် အခန်းလွတ်ထဲတွင် ရုတ်တရက် လာထားဟန်တူကြောင်း အလောင်းပုံစံမှာ ခေါင်းတွင် သွေးများနှင့် ဖူးယောင်နေဟန် ဖန်တီးထားပြီး မျက်နှာကိုသာ ဖော်ထားကာ ကျန်အပိုင်းများကို မြင်ခွင့်မရခဲ့ကြောင်း ရင်နင့်ဖွယ် ပြောပြပါသည်။
၁၆ ရက်နေ့တွင် သတင်းစာ၌ နာရေးကြော်ငြာပါလာသော်လည်း “ရုတ်တရက်” ဟူသော စကားလုံးကို ဖြုတ်ချခဲ့ကြောင်း ပြောပါသည်။
ည ၇ နာရီလောက်တွင် ရဲအုပ်အဆင့်ရှိသူ လူနှစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ဘာလိုအပ်သလဲ ဟုမေးရာ အမတို့အနေနဲ့ “ဘာမှ မလိုပါဘူး ၁၇ ရက်နေ့ အလောင်းရရင် တော်ပါပြီ” ဟု ပြောလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီတွင် အိမ်၌ မြေချသပိတ်သွတ်ရန် မုန့်၊ လ္ဘက်ရည် စီစဉ်ထားသည်။ ထိုအချိန်တွင် မိမိကိုယ်ကို အတွင်းရေးမှူးဟု ပြော၍ လူတယောက်ရောက်လာပြီး မောင်နှမ ၄ ယောက်ကို လူကြီးက စကားပြောချင်လို့ ၄ ယောက်လုံး လိုက်ခဲ့ပါဟု ပြောကြောင်း၊ လူကြီးဆိုတာ ဝန်ကြီးကို ဆိုလိုကြောင်း ထိုလူက ပြောသည်။
အမကြီးက ဖုန်းမော်ကိုပြပြီး သင်္ဂြိုဟ်မှာလားဟု မေးရာ မဟုတ်ပါဘူး လူကြီးက စကားပြောချင်လို့ ခေါ်တာပါဟုပြောရာ ဘုန်းကြီးများ မရောက်သေး၍ ညီမငယ်ကို နေခဲ့ရန်မှာစဉ် လေးယောက်စလုံး လိုက်ခဲ့ရန် အတင်းခေါ်ရာ ညီမငယ်က နေခဲ့ကြောင်း ပြောပါသည်။
၆း၃၀ လောက်တွင် ၄၇ လမ်းရုံးသို့ ခေါ်သွားရာ အတန်ငယ် ကျယ်ဝန်းသော အခန်းတွင် မိနစ် ၃၀ လောက် ထိုင်ခိုင်းထား၍ “လူကြီး ဘယ်မှာလဲ” ဟုမေးတိုင်း မဖြေဘဲ မုန့်၊ လ္ဘက်ရည်နှင့်သာ ဧည့်ခံကြောင်း၊ သို့သော် မသောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါသည်။
အတန်ကြာမှ ဂျပန်ဆေးရုံ (အထွေထွေ ရောဂါကုဆေးရုံ) သို့သွားရန် ဟိုင်းလပ်စ်ကား တစီးပေါ် တက်ခိုင်းပြီး ဆေးရုံကြီးသို့ ခေါ်လာခဲ့သည်။ ဆေးရုံကြီးတွင် ၉၂၉ နှစ်စီး၊ အသုဘယာဉ်၊ ဘုန်းကြီး ငါးပါးကားနှင့် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ ကားတချို့ တွေ့ရတော့မှ အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် အသုဘချရန် စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ရိပ်မိ၍ ဆင်းမည်ပြုရာ ရဲအုပ် အမျိုးသမီး ၃ ဦး ပိတ်တားပြီး လုံးဝ ဆင်းခွင့်မရခဲ့ကြောင်း။
“အမတို့မှာ ငိုယုံကလွဲလို့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်” ဟု ရင်နင့်ဖွယ် ရှိုက်သံတဝက်ဖြင့် ပြောပြပါသည်။
ဂျပန်ဆေးရုံရောက်ပြီးနောက် ဆင်းခိုင်းသည်။ မဆင်းလိုကြောင်းပြောရာ လာခေါ်စဉ်က လေသံမျိုး မဟုတ်ဘဲ မဆင်းရင် အတင်းဆွဲချ ဟုပြောရာ အမကြီးက “ကဲ ဆင်းပေးလိုက်တော့၊ သူတို့မှာ လက်နက်နဲ့ အာဏာရှိတယ်” ဟုပြောရာ အကိုကြီး တယောက်တည်း ဂျပန်ဆေးရုံ အနောက်ဘက် ရေခဲတိုက်ထဲသို့ ဝင်လိုက်သွားသည်။ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို ဗီဒီယို ရိုက်နေကြောင်း၊ အနားတွင် ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်းလည်း ရှိနေကြောင်း ပြောပါသည်။ အကိုကြီးကို ရေခဲတိုက်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ အခန်းထဲတွင် အရပ်ပုပု အသက်ကြီးကြီး ဆရာဝန်ကြီး ရှိနေကြောင်း၊ အလောင်းကို မန္တလေး ရှပ်အဖြူ လက်ရှည်နှင့် ပုဆိုးကို ကျပ်နေအောင် စည်းထားကြောင်း ပြောပါသည်။
အလောင်းကို ကြည့်ရှုခွင့်တောင်းပြီး ကြယ်သီးဖြုတ်၊ ပုဆိုးလှန်ကြည့်ရာ မေးအောက်မှ ရင်ဘတ်တလျောက် ချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ညာဘက်နံပါး၌ ကန့်လန့်ဖြတ် ချုပ်ရိုးတကြောင်းရှိ၊ သေနတ်ဒဏ်ရာရှိသော ရင်ဘတ်နေရာ၌မူ အသားများကို လိပ်ယူချုပ်ထားပြီး၊ ဆီးစပ်တွင် ဒဏ်ရာတွေ့ရပြီး ညာဖက်ပေါင် ဒူးဆစ်အထက် သေနတ်ဒဏ်ရာကိုလည်း ချုပ်ရိုးဖြင့် လိပ်ချုပ်ဖုံးကွယ်ထားသည်။
ကျည်ဆံ နှစ်တောင့်ကို ဆရာဝန်ကြီးက ပြကြောင်း၊ ခဏသာ ကြည့်ခွင့်ရ၍ အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်သွားကြောင်း ကြေကွဲဖွယ် သိရှိရပါသည်။ အပြင်ဘက်၌ ဆိုင်ရာ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပင့်ဆောင်ထားသော ဘုန်းကြီးငါးပါးနှင့် အကိုကြီးတို့ကသာ ကွယ်လွန်သူအတွက် သရဏဂုံကို အကျဉ်းချုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။
ပိုက်ဆံ မထည့်ရသေး၍ တောင်းပြီး ထည့်လိုက်ရကြောင်း၊ ရေအိုး မခွဲရ၊ စားမြိန်ထုတ် မထည့်လိုက်ရကြောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ထုံးတမ်းစဉ်လာများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့် မရခဲ့ကြောင်း၊ ရင်နင့်ဖွယ် ကြားရပါသည်။
ဆိုင်ရာက ထုတ်ပေးသော အမိန့်တမ်းတွင် ဆူးချွန်နှစ်ချက်ဖြင့် ကွယ်လွန်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
ကျောင်းသားများနှင့်အတူ ကြံတောသင်္ချိုင်း၌ အရိုးအိုးဖြင့် စနစ်တကျ သင်္ဂြိုဟ်လိုသော်လည်း ဆိုင်ရာမှ အတင်းအကြပ် စီမံမှုဖြင့် တာမွေသင်္ချိုင်း၌ ဖုန်းမော်၏ ရုပ်ကလာပ်ကို မီးသင်္ဂြိုဟ် ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ အရိုးကောက်ခွင့်ပင် မရခဲ့ပေ။
မနက် ၈း၄၅ နာရီတွင် မီးသင်္ဂြိုဟ် ပြီးစီးခဲ့သည်။ သင်္ချိုင်းတခုလုံး ရှင်းလင်းနေပြီး အတော်ဝေးဝေးမှ ရပ်ကွက်ရှိ ကလေး၊ လူကြီးများက တခါမျှ မကြုံစဖူး မနက်ခင်း အသုဘကို အံ့ဩထိတ်လန့်စွာဖြင့် ကြည့်နေကြသည်ဟု သိရသည်။
အိမ်သို့ ပြန်အပို့တွင်လည်း အိမ်တိုင်ရာရောက်မပို့ဘဲ လမ်းထိပ်၌ပင် ရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံ၍ ချထားခဲ့သည်။
လှည်းတန်း ကြံတောတို့၌ အသုဘပို့ရန် ကျောင်းသားမြောက်များစွာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်ကိုသိ၍ ကြီးကျယ်စွာ အသုဘချခြင်းကို လွှဲရှောင်လိုသောဆန္ဒဖြင့် အစိုးရက လှည့်စားဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
၁၉ ရက်နေ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး၌ ကျောင်းသား အရပ်သားများ လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိကြပေ။ ထောက်လှမ်းရေးက ဓာတ်ပုံရိုက် ဖမ်းဆီးနေသည်ဟု သတင်းလွှင့်ပြီး သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်တားဆီးခဲ့သည်။ အစိုးရကလည်း ဖုန်းမော်အား ဆိုးသွမ်းလူငယ်၊ နိုင်ငံကို ပုန်ကန်သူ တောတွင်း အဆက်အသွယ်ရှိသူအဖြစ် သတင်းလွှင့်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့အသံနှင့် သတင်းစာများကလည်း ရပ်ကွက်နှင့်ရန်ဖြစ်၍ သေဆုံးသည်ဟု သတင်းလွှင့်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်သည့်အပြင် သေဆုံးသူ၏ မိသားစုကိုလည်း ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများသဖွယ် ချုပ်ခြယ်ခြိမ်းချောက် ဖိနှိပ်၍ လူမဆန်စွာ ဆက်ဆံခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ မမာမာဝင်းကို ကိုဖုန်းမော်၏ ညီမနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းရာ ကိုဖုန်းမော်၏ ညီမသည် အကိုအတွက် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး တရားဟော လှုံ့ဆော်သဖြင့် ဖမ်းဆီးထောင်ချ အသတ်ခံရသည်ဟု လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းဖန်တီးပြီး ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် သတင်းလွှင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြခဲ့သည်။
ကိုဖုန်းမော်၏ ဘဝခရီးကို မေးမြန်းကြည့်ရာ မမာမာဝင်းနှင့်အတူ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ ရဲဘော်ရင်းများ ဖြစ်ကြသော ကိုခင်မောင်ထွန်းနှင့် မဝင်းဝင်းမြင့်နှင့် ကိုမင်းထွဋ်တို့က ဝိုင်းဝန်းဖြေဆိုခဲ့သည်များကို အကျဉ်းချုပ် တင်ပြပါသည်။
ကိုဖုန်းမော်သည် ၅ တန်းမှ ၁၀ တန်းအထိ လသာ ၁ တွင် ပညာသင်ကြား၍ ၉ တန်းတွင် လူငယ် လေကြောင်းသင်တန်း လသာမြို့နယ် လမ်းစဉ်လူငယ်သင်တန်းလည်း တက်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ တွင် ၁၀ တန်းအောင်၍ RC2တွင်တက်ပြီး ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တွင် ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ RIT ရောက်သည့်တိုင် RC2မှ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နှင့် လှုပ်ရှားခဲ့သဖြင့် ဆရာများ၏ အားကိုးမှု၊ ချီးကျူးမှုကို ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ အရံပါတီဝင် တယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ တက္ကသိုလ်အရံတပ်ရင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းများ၏ အောင်လက်မှတ်များ၊ မှတ်တမ်းများ၊ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များ ရရှိထားသည်။ ၈၂ (အောက်တိုဘာ) ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်း လှည်းကူး လုပ်အားပေးစခန်း၊ ၁၉၈၃ (အောက်တိုဘာ) စပါး(၁) ရွှေလောင်းကျွန်း လုပ်အားပေး (ဝါးခယ်မ) တွင် ပါဝင်လုပ်အားပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ပြည်ထောင်စုနေ့၌ပင် ကြက်ခြေနီ တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါးကြိမ်မြောက် သွေးလှူရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုလက်ရှိ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အသင်း အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသူဖြစ်သည်။
နိုင်ငံချစ်မြတ်နိုးပြီး နိုင်ငံအကျိုး နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိတယ်၊ ပါတီ မဝင်ရင် အခွင့်အရေး မရဘူး၊ ပါတီဝင်မှ ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်တန်းရမယ်၊ ကျောင်းပြီးပြီးချင်း အလုပ်လုပ်မယ် ပြောသူဖြစ်ကြောင်း၊ အမများက စီးပွားရေး လုပ်စေချင်တဲ့ကြားက စစ်ဗိုလ်အင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်ရန် ရည်ရွယ်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြည်အကျိုး နိုင်ငံအကျိုးကို တဖက်တလမ်းက သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသူ ကျောင်းသားလူငယ်တဦးအား ရက်စက်ယုတ်မာ လူမဆန်စွာ ပြုမှုကို ဖုံးဖိလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူအဖြစ် လိမ်လည် ဝါဒဖြန့်ခဲ့သည်။
မမာမာဝင်း၏ ဆန္ဒကိုမေးရာ ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးရခြင်းအတွက် ယူကျုံးမရ ဖြစ်ရသည်၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရသည်။
မည်သို့မျှ နှိုင်းယှဉ်မရ၊ အစားထိုး မရအောင် နှမြောရသည်၊ အစိုးရ မပြုတ်မချင်း လူလာ မဖြစ်ပါစေနဲ့၊ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်မှာ မဟုတ်ဘူးဟူ၍လည်းကောင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များဟာလည်း အမိန့်ပြန်စာ ထုတ်ပေးစေချင်တယ် ဟူ၍လည်းကောင်း ပြောပါသည်။
အစိုးရ မပြုတ်မချင်း လူလာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ...
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသည့်
စက်မှုအားမာန် စာစောင်၊ အမှတ်စဉ် (၄)၊ ၁၇.၉.၈၈ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Sunday, March 20, 2011 8:35 AM | Posted by Unknown
8:31 AM | Posted by Unknown
8:19 AM | Posted by Unknown
Remarks by President Barack Obama on Libya Delivered From Brasilia Brazil